| | မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက် သုံးစွဲခများကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ Data Rate ဖြင့် ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၏ အစီအစဉ်သည် ဖုန်းအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ အတွက် အဆင်မပြေနိုင်ကြောင်း သုံးစွဲသူများက ဆိုသည်။
Soe Nyunt November 27, 2012 - 7:17 pm All people should go to street for demonstration.
Reply Lamin November 27, 2012 - 10:35 pm volume နဲ.ကောက်င်္ပြး download ဆွဲနေတုန်း connection ကျသွားရင်အစကနေပြန် down ရရင်သွားပြီပေါ. connection ကျသွားရင် ဘယ်လိုတာဝန်ယူမှာလဲ။ ပိုက်ဆံရဖို.ပဲကြည်.တယ်။တာဝန်ယူ ဘို.ကြတော. ဘာမှ မပြောကြပါလား။ သြော် MPT ရယ်။
Reply kyi thar November 28, 2012 - 2:40 am “အင်တာနက်မြန်နှုန်းက တက်လိုက်ကျလိုက် ဖြစ်နေတာ။ ဒီလိုနှုန်းထားနဲ့ ဒေါင်းလုတ်ဒ်ဆွဲသုံးစွဲမှုအပေါ်မူတည်ပြီး သုံးစွဲခကောက် ခံ မယ် ဆိုရင် ပေးရမယ်ဆိုရင် လက်ရှိပေးနေရတဲ့ငွေထက် အများကြီး ပိုကုန်မှာပဲ။ ဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့ အင်တာနက်လိုင်း ကောင်းအောင် အရင်လုပ်သင့်တယ်
Reply swe htwe November 28, 2012 - 11:58 pm That’s right.
Reply Ko Aung November 28, 2012 - 9:26 am Why they change the promise ?
Reply mg mg November 28, 2012 - 10:37 am no head >>ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးစိုးအောင်ကမူ“အရင်က ဒေါင်းလုတ်ဒ် ဆွဲချင်သလောက် ဆွဲလို့ရတယ်။ ပိုက်ဆံသိပ်မကုန်တော့ လိုင်းဆွဲများပြီး အင်တာနက်လိုင်းညံ့တယ် ဖြစ်လာတယ်။ ဘယ်လိုလုပ် ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဖြစ်လာလဲ <<
Reply philip November 28, 2012 - 12:21 pm အိုဘားမားလာတုန်းကတော့ အင်တာနက် လိုင်းက ကောင်းအောင်လုပ် နိုင်ရင် အခုက ဘာဖြစ်လို့ မလုပ်နိုင်တာလဲ။
Replyုkyaw lwin November 28, 2012 - 3:52 pm data mining လုပ်မည့် သာမန်လူတန်းစားအတွက် တက်နိုင်မည့် သင့်လျော်သောနှုံးထားဖြင့် ကောက်ခံမည့် scheme တစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။ ဤသို့မဟုတ်ပါက တိုင်းပြည်၏ အလွှာစုံ ကဏ္ဍစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို နှောင့်နှေးစေရန် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုရာရောက်ပါလိမ့်မည်။ အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းတွင် wired internet connection ကို သင့်လျော်သောနှုံးထားဖြင့် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်သုံးဆွဲနိုင်ပါကဤ comment ကိုရေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
Reply Ko Hlaing November 29, 2012 - 8:14 pm Our government is promoting E-learning, E-government, and E-etc every time especially in front of public and the leaders of other countries. But everybody knows they are afraid of E-communication. This is the strategy of combating it. They are keen in that kind of negative thing, not for positive change to people. Please use that kind of red or black intelligent mind for betterment of our people. Then everybody will cheer you up. Please be purify your mind. If not, it is very much shameful.
Reply တောသား November 29, 2012 - 11:06 pm ငါတို့နိုင်ငံကလည်းကွာ။ အောက်တန်းကျလိုက်ပုံများကတော့။
Reply ဦးအတွေ့အကြုံ November 30, 2012 - 8:36 am A4တစ်စောင်စကင်ဖတ်ပြီးအီးမေးပို့ရင်ဘယ်လောက်ကျမလဲ၊နားလည်သူရှိရင်
Reply ကျော်စိုး November 30, 2012 - 2:50 pm ကြည်လည်လုပ်ပါ ပြည်သူ
Reply YURI November 30, 2012 - 2:55 pm စိတ်မလျှော့ပါ။ 700 MB , 1 GB ဘယ် Plan မှမရွေးပါ။ လက်မခံပါ။ဖြတ်တောက်ချင်သလောက်ဖြတ်တောက်ပစေ။ ကန့်ကွက်မယ်။ ဆန္ဒပြမယ်။ တောင်းဆိုမယ်။
Reply ဦးမင်းမြတ်သူ December 1, 2012 - 10:19 am ဖုန်းနှင့် internet အသုံးပြုသူတွေကို သနားကြပါအုံးဗျာ။ လိုင်းကမကောင်း ၊ ဈေးကကြီးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လိုအောက်ခြေလူတန်းစားတွေ လျှာထွက်ရုံပဲ ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ website ကြည့်ရင် ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲ။ Download ကတော့ file size ကြည့်လို့ ရတော့ ကုန်ကျစရိတ် တွက်လို့ ရသေးတယ်။ တိတိကျကျလေး သတင်းထုတ်ပြန်ပေးပါ။ ယခုပုံစံအတိုင်းကတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။